DEG DEG: Midowga Musharaxiinta oo war kasoo saaray tallaabadii uu qaaday Rooble | Entertainment and News Site
Home » News » DEG DEG: Midowga Musharaxiinta oo war kasoo saaray tallaabadii uu qaaday Rooble
DEG DEG: Midowga Musharaxiinta oo war kasoo saaray tallaabadii uu qaaday Rooble
daajis.com:- Golaha Midowga Musharraxiinta Soomaaliya ayaa soo dhoweeyey go’aankii uu ra’iisul wasaare Rooble toddoba xubnood uga eryey guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka, waxayna dalbadeen tallaabooyin kale.
“Golaha Midowga Musharraxiinta wuxuu soo dhaweynayaa tallaabada uu xilka kaga qaaday Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble xubno ka tirsan Guddiga Xallinta Khilaafaadka si loo xaqiijiyo hufnaanta doorashooyinka, loogana hortago ku xadgudubka xuquuqda muwaadinka, islamarkaana laga fogaado wax kasta oo dhaawici kara hufnaanta doorashada, keeni karana cadaalad darro,” ayaa lagu yiri qoraal ay soo saareen golaha.
Golaha ayaa dalbaday in lagu laabto go’aanadii ay horey u gaareen guddiga xalinta khilaafaadka.
“Isbedelka lagu sameeyay Guddiga Xallinta Khilaafaadka wuxuu horudhac u yahay soo celinta kalsoonida shacabka, waana in dib looga laabto go’aannadii guddiga ay hore u gaareen,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.
“Goluhu wuxuu ku dhiirri gelinaayaa Ra’iisul Wasaaraha inuu waddo kasta oo sharci ah u maro suulinta caqabadaha dhiman ee weli ku horgudban doorashooyinka Golaha Shacabka, si ay dalka uga dhacdo doorasho hufnaan iyo daahfurnaan leh, maadaama isaga loo igmaday taabbagelinta doorashooyinka dalka.”
Midowga Musharaxiinta ayaa sheegay inay garab istaagayaan tillaabo kasta oo lagu saxayo geedi-socodka doorashada, si loo helo doorasho natiijadeeda lagu kalsoonaan karo, dalkana ka samatabixisa qalalaase siyaasadeed iyo mid amni.